Andrianainarivelo Hajo : « Fanjakana mpanao loham-boto… » | NewsMada
Andrianainarivelo Hajo : « Fanjakana mpanao loham-boto… »
Mahafehy ny tranga rehetra miseho eto amin’ny firenena. « Tsy mba takatr’ity fitondrana ity izany fifanajana izany. Fitondrana tsy mendrika ary fanjakana mpanao loham-boto, araka ny hiran’i Mahaleo, fanjakana loham-boto tsy mba ho ela velona… », hoy ny filoha nasionalin’ny Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo, teny Tsimbazaza, omaly. Namaly ny fotoana nomen’ny filohan’ny Antenimiera, Rakotomamonjy Jean Max ny tenany sy ny delegasiona notarihiny tamin’io omaly io, saingy tsy nipoitra ny tompon-trano. Nisolo tena azy ny filoha lefitry ny Antenimiera, Mahazoasy Freddy ary nilaza fa tsy mbola tonga eo amin’izy ireo ny valin-taratasy avy amin’ny HCC momba ny fankatoavana ny hidiran’ny Malagasy miara-miainga ho mpanohitra, manomboka izao. Nahatsiaro tena ho voapetrapetraka ireto delegasiona ireto. « Efa nomena fotoana izahay anio hifandinika momba izany… Zonay araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana ny manohitra ary efa vita avokoa ny dingana rehetra ka hitaky izany izahay na amin’ny mora na sarotra », hoy ihany Andrianainarivelo Hajo.
Hifandinika ary haka fanapahan-kevitra
Nambarany fa haka fanapahan-kevitra ary tsy hipetra-potsiny ny antoko manomboka izao, manoloana izao familafilana sy tsy fifanajana izao. Nahitsy ny fanehoan-keviny manoloana ny raharaham-pirenana fa tsy hanaiky ny ho voarebireby. « Tsy mendrika ho mpitondra ary fanjakana kanosa... », hoy ihany izy.
Tsiahivina fa notapahin’ny zaikaben’ny antoko ny 31 oktobra teo ny hipetrahany amin’izany toerany izany. « Hiantsoroka ny andraikitra rehetra amin’ny maha mpanohitra ary hitarika izany araka ny voasoratra amin’ny lalàmpanorenana isika…Tonga ny fotoana hanatanterahana izany… Tsy mora ny fanapahan-kevitra… Roso ity tsa mipody koa… », hoy ny filoha nasionalin’ny antoko Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo tamin’izany. Nohitsiny fa hitondra fanovana eo amin’ny antoko sy eto amin’ny firenena izany
Misy matahotra ny tena ho fijoroan’ny mpanohitra ara-dalàna eto izany eto ?